Fanehoankevitra Maneran-tany Taorian’ny Famotsorana Ilay Nahavanona Fanapoahana Baomba Tao Lockerbie · Global Voices teny Malagasy
Hany valinteny azo raisina ny fanadihadiana manontolo ny raharaha Lockerbie
Voadika ny 21 Avrily 2019 14:16 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny teny frantsay ny 25 Aogositra 2009)
Avelao Helena hanokatra ny fifanakalozankevitra amin'ity lahatsoratra ity, nivoaka tao amin'ilay mpamondrona Bilaogy Isiraely Palestina Peace Blogs Aggregator [Amin'ny teny Anglisy avokoa ny rohy rehetra] :
Na mirehidrehitra na tsia, ny azo antoka dia maro ny adihevitra mipetraka eny amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana sy eny anatin'ny tontolon'ny bilaogy momba ilay lehilahy tokana hany voaheloka noho ny fipoahan'ny fiaramanidina 103 an'ny Pan Am, ilay Libyana Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi.
Voaheloka higadra mandra-pahafatiny ilay «mpampihorohoro tao Lockerbie» noho ny fandraisany anjara tamin'ilay fipoahan'ny sidina teo ambonin'ny habakabak'i Lockerbie, tao Ekaosy, ny taona 1988, izay nahafaty olona 270. Voan'ny homamiadan'ny “prostate” efa fara-tampony izy, ary tsy misy afatsy telo volana latsaka sisa no hahavelomany, ary dia navotsotry ny manampahefana ao Ekaosy izy noho ny antony maha-olona.
Noraisina tamina hiakiaka sy fanehoankevitra henjana ny famotsorana azy, niteraka fanontaniana sy adihevitra maro.
Nokianin'ny fanaovan-gazety amerikana sy britanika ilay lazain'ny haino aman-jery nentim-paharazana ho «fandraisana mahery fo» azon'i Megrahi rehefa niverina tao Libya izy. Fa ahoana kosa ny fanehoankevitra anaty aterneto ?
rfitzgibbon, mpampiasa Twitter iray any Etazonia, maneho fihetsehampo iray izay akon'ny hevitr'ireo Amerikana maro mavitrika ety anaty aterneto :
Henatra ho an'i Ekaosy izay namotsotra mpampihorohoro voaheloka. Henatra ho an'i Libya izay mandray azy ireny ho toy ny mahery fo.
Tsy niditra lalina loatra tamin'ny nahameloka na tsia an'i Megrahi, nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Anglo-Libyan, fa tsy afa-po amin'ny fandraisana nomena an'ilay zalahy iny teny amin'ny seranam-piaramanidina. Hoy izy manoratra :
Tafody i Al-Megrahi … any Libya, nanantena ihany koa aho fa ho mangingina ny fiverenany any Libya, nefa tena noraisina ho toy ny mahery fo izy!.
Tsy fantatro raha meloka amin'io heloka mahatsiravina io izy, fa efa voaheloka tamin'ny famonoana sivily tsy manan-tsiny 270 isa izy, nefa manoloana izany, nasehon'ny manampahefana Libyana mihitsy hoe hatraiza ny tsy firaharahian'izy ireo ny fanaintainan'ny fianakavian'ireo niharam-boina, tsy zaka izany ho an'ny ankamaroan'izy ireo.
Naneho hevitra mikasika ilay fanapahankevitry ny governemanta ao Ekaosy izy (toy ireo olona maro, dia sady miahiahy ihany momba ny antony nandraisana io fanapahankevitra io), ary tena mampiseho fitsikerana mihitsy amin'ny fomba fandraisan'ireo manampahefana Libyana an-tanana ity raharaha ity :
Nandray fanampahankevitra feno fahasahiana ny Governemanta tao Ekaosy tamin'ny famotsorana an'i Al-Megrahi mba hahafahany hiaraka amin'ny fianakaviany mandritra ny andro sisa iainany, ka anjaranao no mitsara raha fangorahana no nanaovan'izy ireo izany na fotsiny ho an'ny tombontsoan'ny fifampiraharahana. [Na izany aza]
Raha tsy nanan-tsiny izy, dia tokony nijanona sy maty niady ho fanadiovana ny anarany, ary mbola nanimba ny tenany indray mandeha koa ireo manampahefana Libiana.
Adam White, mpampiasa Twitter ao UK, no nanolo-kevitra hoe tsy voatery hidika foana ho «fandraisana makotrokotroka» araka izay iheverana azy ny fisian'ireo lona marobe tonga nanotrona:
Mihevitra aho fa navotsotr'izy ireo izy satria efa hatramin'ny voalohany no efa tsy nananan'izy ireo ny porofo mavesa-danja hanamelohana azy. Mety tsy ho afaka hiaina maharitra akory izy mba hahita izay ho valin'ny fanadihadiana vaovao. Moa mahery fo izy ao Libya, sa noraisina ho toy ny olona voaheloka tsy nahy ?
Nampiako izany fihetsehampo izany i Syrianews tamin'ny fanamarinana ilay fandraisana natao azy :
Fa nahoana no tsy nanaovana fety lery? Nody mba handany miaraka amin'ny fianakaviany ireo andro sisa iainany ny lehilahy iray heverina ho tsy meloka – na dia ny ao amin'ny fianakavian'ireo niharam-boina aza.
Efa hatramin'ny voalohany no nampiady hevitra io fanamelohana an'i Megrahi io, ary nipoitra indray ny fanontaniana mikasika ny mahaheloka azy hatramin'ny namotsorana azy. Ny sasany mahita ny fihemorany tsy hangatahaka fampakàrana fitsarana – fepetra iray nahazoany famotsorana, ho an'ny maro – ho toy ny fitaovana hanafenana ny fanamelohana tsy nahy azy.
Ny tena loza, dia ny tsy maintsy nihemorany tsy hangataka fampakarana didim-pitsarana mba ho afahana noho ny fangorahana. Tsy ho fantatsika mihitsy ny marina. Mampety ny olona sasany izany.
IIbn Kafka, ao amin'ny fanehoankeviny tamin’ity lahatsoratra ity, dia tsy faly ny amin'ny famoahana olona iray voaheloka, saingy amafisiny ireo ahiahy momba ny maha-meloka an'i Megrahi :
Raha tena meloka tamin'ny fipoahana tao Lockerbie izy, tokony ho faty any am-ponja na ho vonoina ho faty . Manahy be ihany ny amin'ny fahamarinan'ny fanamelohana azy hatramin'ny voalohany aho, miaraka amin'ireo honohono miverimberina amin'ny fisianà fandraisana anjaran'i Siria.
Ny hafa indray mahita an'i Megrahi ho toy ny olona nataon'ny Libia fotsiny ho mpisolo vaika ny ankalana. The Angry Arab, izay maneho hevitra momba ny fanamelohana nataon'i Hillary Clinton an'ilay fanapahakevitr'i Ekaosy, dia miampanga an'i Etazonia ho «mody kiriko ihany» :
Hillary Rodham Clinton, ilay sekreteram-panjakana, dia niasa mafy hanoherana io fanapahankevitra io, tamin'ny nilazany fa tena «fahadisoana goavana ny famotsorana an'Ingahy. Megrahi.» Oh, miangavy aho, aza atao aty amiko izany resakareo mody hoe fahamendrehana ara-moraly izany. Ny governemantanao aza manambitamby ny lehiben'ny mpampihorohoro Kadhafi,, izay nandidy ny asa fampihorohoroana nanapoahana ny sidina 103 an'i Pan Am.
Ekena fa mihamitombo ny fandrakofan'ny haino aman-jery ity tranga ity ary mampametra- panontaniana be dia be mihoatra noho izay mety ho nandrasana tany am-piandohana. Maro no manomboka mangataka fanadihadiana vaovao mikasika iny raharaha iny amin'ny ankapobeny, anivon'ireo fiampangana fisianà hevitra sy adivarotra miafina.
Ao amin'ny blaogin'ny Affaire de Lockerbie, izay namoaka torohay momba io raharaha io hatramin'ny taona 2007 , mpamaky iray no naneho ny heviny nametraka teny, ho fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity :
Raha mitohy amin'izao fizotrany izao ny zavatra rehetra, ho lasa anton-javatra malaza be ny al-Megrahi / Lockerbie ka ho tonga boky hodinihin'ny mpianatra politika na mpianatra tantara eny amin'ny oniversite, na eny amin'ny lisea sy kolejy mihitsy aza. Manomboka hita maso ny aretin'ny ravina voaloboka any Westminster sy any an-kafa . Misaotra an'i Saif al-Islam ihany koa noho ny fandraisanao anjara mavitrika sy ara-potoana androany tamin'ity lohahevitra ity – angamba ny fanofisana fanadihadiana tsy miankina fotsiny amin'ny resaka nofinofy efa ninako hatreto.
Raha toa ilay mpamaky Nennt mich einfach Adam! mahita fa:
Na inona na inona mety ho fikasan'ireo mpifanandrina isan-tokony – ny hany valinteny azo raisina dia ny fanadihadiana manontolo ny raharaha Lockerbie.